Umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali-Abenzi bezigidi
Nceda ufumane apha ngezantsi kuMgaqo-nkqubo weMbuyiselo yeMiliyoni yaBenzi ("Umgaqo-nkqubo weRefund").
Nceda ufunde lo mgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali kunye nemigaqo nemiqathango ngononophelo ngeenkonzo kunye neemveliso ezi-odolwe kunye / okanye zobhaliso (ze) zezigidi zeMveliso yeemveliso ("iiMveliso"), iinkonzo zeMiliyoni zaBenzi ("Iinkonzo"), kunye newebhusayithi yeMiliyoni yaBenzi https://www.MillionMakers.com/ ("IWebhusayithi") okanye nasiphi isizinda esingaphantsi okanye ngaphandle kweintanethi kwiiofisi okanye kwizakhiwo.
UKUBUYISWA KWIMALI Nokurhoxiswa KWEEMVELISO NEENKONZO
Akukho mbuyiselo okanye inokunikwa okanye yenziwe xa i-odolo yoMthengi yenziwe i-Million Makers kunye / okanye iMM Solutions INC kunye / okanye iMillion Makers LLC kunye / okanye iMM LLC kunye / okanye iMillion Makers Solutions INC kunye / okanye iMM LTD. kunye / okanye i-Million Makers LTD. ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo. Akukho mbuyekezo iya kwenziwa apho Abenzi bezigidi banyanzelwa ukuba benqabe kunye / okanye bayeke ukubonelela ngeeNkonzo ngenxa yayo nayiphi na into eyaphulwe nguMthengi ngeziqinisekiso, izibophelelo kunye nokuzibophelela njengoko kuchaziwe kwiMiqathango neMiqathango.
Akukho zintlawulo zokubonisana okanye iifizi zomthetho ezinokuze zibuyiselwe nayiphi na imveliso okanye iinkonzo okanye uthethwano xa sele kuqalisiwe kwezomthetho kunye / okanye kwishishini.
Ukuba umthengi uthenge naziphi na iinkonzo ezenziwa kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi ngeyiphi na iwebhusayithi yezigidi, iiakhawunti zosasazo zasekuhlaleni kwaye uthathe isigqibo sokurhoxisa iodolo ngaphambi kokuba abaSebenzi abazizigidi baqalise ukwenza lo myalelo, Abenzi bezigidi bazakubuyisa zonke iimali ezihlawulwe nguMthengi . Imbuyekezo inokubangwa kwiintsuku ezi-250 zekhalenda ukusuka kumhla wentlawulo. Akukho mali ibuyiswayo eya kunikwa amabango angaphezu kweentsuku ezimbini zekhalenda, incase, iodolo yenziwa ngumthengi ngokuthe ngqo ngokufaka iodolo yeeNkonzo zeVoIP okanye iiNkonzo zeOfisi eyiyo, njl.njl., Kwimeko apho akukho mbuyiselo inokwenzeka kwaphela xa iodolo iqalisiwe ngumthengi .
Ukuba abenzi bezigidi bayayeka ukubonelela ngeenkonzo okanye ukuba uMthengi angacebisa abenzi bezigidi ukuba abasafuneki kwiQumrhu, umThengi kufuneka ahlawule abenzi bezigidi abazibhatala iimali esele zikhona, ezihlala zingekahlawulwa kunye nemirhumo okanye iindleko, ezinokuthi zenziwe ngabenzi bezigidi abazizigidi ukugwetywa, ukuchithwa, ukupheliswa okanye ukugqithiselwa kweQumrhu, kubandakanywa ukukhutshwa, ukupheliswa okanye ukuphuma kwemali.
Kwimeko yokudluliselwa kolawulo lweQumrhu komnye umboneleli ngenkonzo, Abenzi bezigidi abazakubiza, kwaye iKlayenti iya kunyanzeleka ukuba ihlawule, ikhuphe, okanye iphelise, okanye ikhuphe intlawulo, okanye imali yokukhupha inkampani ngokungqinelana neshedyuli yomrhumo Isebenza ngokusemthethweni ngomhla wotshintsho, kunye nayo yonke imirhumo engekenziwa kunye nokutyalwa nguMthengi kwizigidi zabenzi kunye / okanye iMM Solutions INC kunye / okanye iMillion Makers LLC kunye / okanye iMM LLC kunye / okanye iMillion Makers Solutions INC kunye / okanye MM LTD. kunye / okanye i-Million Makers LTD. Ukuza kuthi ga ngoku ngomhla wotshintsho olo.
Ukupheliswa kokupheliswa kweenkonzo zabaxumi zizigidi zabenzi, umgaqo-nkqubo wokupheliswa okhankanywe apha ngezantsi imimmiselo nemiqathango iphepha liya kusebenza.
Ungasiphelisa isivumelwano sakho kwaye uvale iakhawunti yakho nabasenzi bezigidi nangaliphi na ixesha, ukusebenza ngomhla wokugqibela wobhaliso lwakho, ngokuthumela i-imeyile ku info@MillionMakers.com. Abasizi bezigidi banokulunqamla ubudlelwane babo nawe, okanye banokuphelisa okanye banqumamise ukufikelela kwiWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo nangaliphi na ixesha, kubandakanya nokusetyenziswa kwayo nayiphi na isoftware,
ukuba wophula le Migaqo kunye / okanye nasiphi na esinye isivumelwano nabenzi bezigidi;
ukuba abenzi bezigidi abazikrokrela ngokufanelekileyo ukuba usebenzisa iWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo ukophula umthetho okanye ukwaphula amalungelo esithathu;
ukuba abenzi bezigidi abazikrokrela ngokufanelekileyo ukuba uzama ukusebenzisa kakubi okanye ukusebenzisa gwenxa imigaqo-nkqubo kaMenzi;
ukuba abenzi bezigidi abazikrokrela ngokufanelekileyo ukuba usebenzisa iWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo ngobuqhetseba, okanye ukuba iiMveliso okanye iiNkonzo ezinikezelwe kuwe zisetyenziswa ngumntu wesithathu ngobuqhetseba;
ukuba uyasilela ukuhlawula naziphi na iimali ngenxa yeMillion Makers;
wophula nawuphi na umthetho okanye ummiselo osebenzayo. Emva kokuyekiswa kweakhawunti yakho yaBazizigidi ngezi zizathu zingasentla, akuyi kubakho mbuyekezo yemirhumo kwaye uyakwalelwa ukufikelela kwiWebhusayithi, iimveliso kunye / okanye iinkonzo, kubandakanya yonke idatha.
Isigidi seSenzi sinokuphelisa nasiphi na isivumelwano kunye nokufikelela kwiakhawunti yakho, ukuba iiNkonzo okanye nayiphi na inxalenye yazo, azisafumaneki ngokusemthethweni kulawulo lwakho, okanye azisekho kwezorhwebo, ngokokubona kwabaSebenzi abazizigidi ..
Ukuba uyakholelwa ukuba i-Million Makers yoyisakele ukwenza okanye iiNkonzo azinasiphene, kufuneka wazise abenzi bezigidi ngokubhala kwaye uvumele iintsuku ezingamashumi amathathu (30) ukuba abenzi bezigidi baziphilise. Ukuba abenzi bezigidi bazinyanga isiphako ngeli xesha lokunyanga, abenzi ezigidi abazukusilela kwaye abanakubekwa tyala ngawo nawuphi na umonakalo kunye / okanye ilahleko ngokunxulumene nokusilela oko. Ukuba i-Million Makers ayikunyangi isiphako ngeli xesha lokunyanga, ungaphelisa ukubhaliswa kwangoko, emva kwesaziso esibhaliweyo esiya kwi-Million Makers.
Iintlawulo kunye neNtlawulo
Ngokuthenga iiMveliso kunye / okanye iiNkonzo, uyavuma ukuhlawula i-Million Makers kunye / okanye iMM Solutions INC kunye / okanye iMillion Makers LLC kunye / okanye iMM LLC kunye / okanye iMillion Makers Solutions INC kunye / okanye iMM LTD. kunye / okanye i-Million Makers LTD. Iindleko / umrhumo wokuqala kunye nemirhumo yonyaka yobhaliso eboniswe kwimveliso okanye iNkonzo enjalo. Iintlawulo ziya kulindeleka ukusukela kusuku lokuqala ubhalisela iMveliso kunye / okanye iiNkonzo, kwaye ziya kuhlawula inyanga nenyanga, ngekota, isiqingatha sonyaka okanye ixesha lonyaka, njengoko kubonisiwe xa usayina kwaye uhlawulela iifizi zokuhlaziya.
Ubumbeko kunye namaxabiso eWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo zinokuthi zitshintshe nangaliphi na ixesha, kwaye abenzi bezigidi abazakuhlala benelungelo lokuguqula ubumbeko, iifizi, amaxabiso kunye neekowuti, ngaphandle kokuba akukho lutshintsho lwamaxabiso luya kwenziwa lusebenze ngexesha lokurhuma, kwaye liya kusebenza kuphela emva kwabaSenzi eziMiliyoni kwaye nivumelene ngokwandiswa, ukuphucula okanye ukuvuselelwa kwexesha lokubhalisela. Uyavuma kulo naluphi na utshintsho olunje ukuba awuphikisi ngokubhalela abaMenzi ezigidi zingadlulanga iintsuku ezintathu (3) zomsebenzi zokufumana isaziso seMillion Makers, okanye i-invoice, edibanisa okanye eyazisa umrhumo kunye / okanye utshintsho lwamaxabiso. Onke amaxabiso akhethekile, kwaye uya kuhlawula zonke iirhafu, iirhafu, iirhafu okanye iifizi, okanye ezinye iirhafu ezifanayo ezibekwe kwi-Million Makers okanye ngokwakho naliphi na ugunyaziwe werhafu (ngaphandle kweerhafu ezibekwe kwimali engenayo ye-Million Makers), ezinxulumene nomyalelo wakho, ngaphandle kokuba ubonelele abaSebenzi abazizigidi ngesitifiketi esifanelekileyo sokuphinda bahlawule okanye sokuxolelwa kwindawo yokuhambisa, eyindawo apho iiMveliso kunye / okanye iiNkonzo zisetyenziswa khona okanye zenziwa khona. Kwimeko yotshintsho kumthetho onje ngokuba irhafu ihlawuliswa okanye ingafumaneki ngeso siphumo sonyukayo kwiindleko eziya kwi-Million Makers yokuhambisa iiMveliso kunye / okanye iiNkonzo, apho ke ukuya kuthi ga kubungakanani bezigidi zeMenzi zinelungelo lokunyusa amaxabiso ngokufanelekileyo nangokubuyela umva.